August 7, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 11
HARGEYSA(P-TIMES)- Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta qasriga madaxtooyada ku qaabiley wafti heer sare ah oo uu hoggaaminayey wakiilka China u qaabilsan iskaashiga Africa iyo China “China-Africa Cooperation” (FOCAC), Ambassador. Zhou Yuxiao oo safar saddex maalmood qaatay ku yimid Jamhuuriyadda Somaliland.
Ugu Horayn Madaxweyne Biixi ayaa waxa uu waftiga warbixin guud ka siiyey horumarka ka hana qaaday Somaliland ee ay iska kaashadeen shacbigeeda iyo dawladdu, kaas oo sababay in beesha caalamku indhaha la raacdo kuna dhiiradaan inay maalgashadaan khayraadka kala duwan ee ku duugan dalka, waxaanu
madaxweynuhu xubnaha waftiga u sheegay in Somaliland tusaale u tahay geeska marka loo eego horumarka dhinaca dimuquraadiyada ee uu ku tallaabsaday sagaal iyo labaatankii sanno ee u danbeeyey isbedelada dhinacyada badan leh ee ka hirgalay haday tahay dhinaca doorashooyinka, hanaanka axsaabta xisbiyada qaranka iyo nidaamka qori-isu dhiibka ah ee hoggaanka dalka.
Dhinaca waftiguna waxa ay madaxweynaha kala hadleen sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka soo jireenka ah ee dhinacyada ganacsiga iyo iskaashiga bulshada ee ay labada dal lahaayeen mudada dheer.
Ugu dambayntiina waxa la isku af gartay in labada dal yeeshaan xidhiidh wanaagsan oo ku dhisan ixtiraam iyo in la iska kaashado dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga iyo horumarka.
We don’t recognize what is call Jamhuuriyada Somaliland we know Waqooyi Somaliya- Soomaali-line
‘Somaliland’ in aanay Soomaalidu aqoonsanayn ma aha ee iskeeda ayaanay dunida rasmi uga jirin xaqiiqdii, sababo badan aawadooda. Xataa lagu ma tilmaami karo “Woqooyiga Soomaaliya” sida aad dareenkaaga ku muujisay waayo Soomaaliya woqooyigeedu labo daafood ayuu u sii kala fidsan yahay oo waa Woqooyi Bari iyo Woqooyi Galbeed.
Beelaha Woqooyi Galbeed 99% ma aqoonsana in ay ‘Somaliland’ jirto. Haddii beesha Isaaq gooni loogu nisbeyn lahaa na waxay ‘Somaliland’ sheegataa gobollo aanay beeshaasu degganayn oo Woqooyi Bari deggan, halka reero Isaaq ahi ay iyaguna Woqooyi Bari deegaan ahaan ka tirsan yihiin. Waxaa ka sii daran in Isaaqa oo Woqooyi Galbeed u badan isla geyigaas looga sii tiro badanyahay oo aanay goonidooda u sheegan karin.
Marka xataa taariikhda isticmaariga lala tiigsado, Yurubiyankii mandiqaddeena Soomaaliyeed ku loollamayay waddan rasmi u dhisnaa inta ay ku soo duuleen ma aysan isticmaarsan, waddan rasmi u dhisnaa na kama aysan tagin. Soomaaliya ma jirin oo Jabuuti ma jirin oo waxii kalena warkooda ba daa. Geyiyadii mandiqadda Soomaaliyeed ayaa labo ka mid ahi isticmaarkii ka dib isku darsamay oo waddan rasmi ah laga askumay oo waa Soomaaliyada min Laama Shaaqa (xadka Kenya) ilaa Lowyacaddo (xadka Jabuuti) ku fadhida.
nuur iyo boodhari, 1% ayaa somali oo dhan u sareysa. boqortooyo ayaa xukunta meesha ee ka leexo, gafuurka culus meesha hasoo dhigine
ree somalia ama ma jirto dhaha ama wey jirtaa, midkoodna waxkaga badali meysaan waaqica runta ah, waligiinba qowqowleeya. somaliland kibirkii china hadey sida awrta u tu’isey, qadaadweyn hadalkeedu waa hal bacaad lagu lisey.
In la doodo waa sababta ay madashani u furantahay. Waxaa caayda kuu sharaf dhaantay adiga oo xaqiiqooyinka dhabta ah ee masalada ‘Somaliland’ lagu beeniyay la yimaadda kuwo raddin kara oo aad taariikhda u soo xigatay.
Anagu caadifadaha khaliga ah wax kuma cabbirno ina Hargeysoow, waaqiciga dhabta ah ayaynu la kaashannaa. Waaqiciga dhabta ahi, xaqiiqooyinkaas ka sokoow, waxaa weeye in aanu qabiil yar oo qabaa’il kale geyi la wadaaga iskii qaran u noqon karin mar haddii aanay kuwa kale qaddiyaddaas la wadaagin.
Marka hannaanka iyo hab-u-dhaqanka siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka xaajada lagu saleeyo na saddex gobol oo aan macdanta ugu qaalisan, baatrool mise aqoon tiknoloojiyadeed oo baahsan midna lahayn ma fulin karo shuruudaha, shuruucda, qawaaniinta, iyo baratakoollada adag ee u degsan yagleelidda waddan ugub oo dunida ku soo biira. Ummad ahaan uun baynu wax ku ahaan karnaa.
qof qabiil indha tirey waxma tusi karo, nin cuqdadi dhaga xidheyna waxma maqlo, markaa waxeymu ka doodno ayaanan arkeynba. somaliland gobol kasta oo dhulkeeda ka mida ah iyadaa ka talisa, baryo waxla yidhaana meesha ma yaalaan, oo sidanu bintiland u edbinaa ka markhaatiya, markaa iska wado riyadaada.
@Hargeysa boy or girl.
Ahhhh, dowlada china warkeedu wuu cad yahay ONE SOMALIA iney maamul goboleed side somaliland inay aqoonsato taasi ha sugina hhh Taiwan iyo china meel ma wada galaan… waxii mashariic ah waxaa toos loo soo marsiin villa Somalia. Arintaan ah maamul goboleedka somaliland inuu ka taliyo goboladeeda oo dhan arinkaa sax maha waayo sool iyo sanaag WAA MEEL FURIN AH MAANTA, Inuu iiidor soo galo sool waxaa u masaabaxey dadka deeganka oo aanan timahooda hal meel loo xiiri karin
Ali nin hanyar baad tahey, mashaaricdad sheegeyso oo dhan madaxa saaro, china ninka africa u qaabilsan ayaysoo dirtey oo waliba biixe dhawr maalmod ka baryayey aragiisa, adiga laakiin sadaqo meel kale ka timi baa kuu cad.
sool iyo sanaag dadkii lahaa baa haysta markaa, bugland aka copy of somaliland talo ugama taalo, qabiil kasta oo somaliland dagani wuu u siman yahey dalkan, fitmo aad tiiniiba ku burburiseena nala soo gali meysaan, oo horaanu iskaga kiin moosney
Waxaad ka mid tahay Ciyaalka lagu abaabiyay Soomaali diidnimada, waa lagugu gurey oo waa lagugu gurey sidaa daraadeed waa lagaa gurin oo lagaa gurin
Nour af waakana meyla ka aamee..hadal madhani wax ma taro sxb…ninkii iga guri lahaa wali hooyo may dhalin. Anoo calankeyga hadhsanayana inuu ciideyda cadaow iigu yi.aado,ciidanka qarankaa diidey. Markaa again iska riyooda,riyo cashuur lagama bixiyee